Sale & Marketing Supervisor Archives - Glory Assumption Space
Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • Medical ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။ • ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများဝင်ထွက်သွားလာပြီး ဆရာဝန်များကိုပြောဆိုနိုင် သူဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည်။ • ဆေးကုမ္ပဏီများတွင် လုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင် ရပါမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တွင်ရှိသော ဓါတ်ခွဲခန်းကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါ ရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါ ရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ •	တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။ •	Sales & Marketing နှင့်သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများတက်ရောက်ထား သူဖြစ်ရမည်။ •	အသက် ( ၂၅ - ၃၀ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	Computer (Word,Excel ) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	Supervisor Level ဖြင့် ( ၃ ) နှစ်အထက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ •	Personal Skill/Customer Relationship ကောင်းမွန်ရမည်။ •	လိုအပ်ပါက အထက်မြန်မာပြည်သို့ ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Trading /Distribution နယ်ပယ်မှဖြစ်ရမည်။ •	Fashion /Textile ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တွင်ရှိသော Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_8228" align="alignnone" width="640"] Mid adult Chinese woman on shop floor, new clothes hanging on rails, pride, efficiency, order[/caption]
၁)Sales & Marketing Supervisor (Freight Forwarding) – Male/Female (10) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လသာမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • နယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • ယခင် Marketing & Distribution နယ်ပယ်ဖြစ်ရမည်။ • Sales Plan / Marketing Plan / Sales Target များကို ဆွဲပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • ကားလိုင်စင်ရှိရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် ( 9:30 AM – 5:00 PM ) • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လသာမြို့နယ်ရှိ Cargo & Freight Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Supervisor - Male - (5) Posts / လစာ - ၃၅ဝ,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း )
၁)Sales & Marketing Supervisor - Male - (5) Posts / လစာ - ၃၅ဝ,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • ကားအရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ • Driving Licenceရှိရမည်။ • Computer Basic ရရမည်။ • ဖယ်ရီရှိသည်။ နေ့လယ်စာကျွေးသည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီမှ ညနေ ( ၅း၃၀ ) နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ Truck & Machinery Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကိုတစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number –09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ– ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Male - (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၁) Sales & Marketing Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ •	စားသောက်ကုန်အရောင်းပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည် ။ •	အသက် ၃၂ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် ။ •	ကားမောင်းနိုင်ရမည်။ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ •	အလုပ်ချိန် မနက် ၈: ၃၀ နာရီမှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင် သူဖြစ်ရမည်။ ၁ ) Sales & Marketing Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် / လစာ - ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်/လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်မှ (၃၀)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - FMCG ပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ့ ရှိရမည်။ - Computer အနည်းငယ်အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာအရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ - တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Male /Female (5)Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Furniture Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ ၁ ) Sales & Marketing Supervisor – Male /Female (5)Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - ပရိဘောဂ အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2237" align="alignnone" width="569"] Concept image of Sales & Marketing onasignpost againstamodern glass office building.[/caption]
Sales & Marketing Supervisor – Male(or)Female - (5)Posts /လစာ- ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
URGENT REQUIREMENT ######
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက်၃၀-၃၅ နှစ်ကြားရှိရမည်။ - အရောင်းဝန်ထမ်းများအားကောင်းမွန်စွာကြီးကြပ်နိုင်ရမည်။ - စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ စနေနေ့တပတ်ခြားပိတ်သည်။ 1. Sales & Marketing Supervisor – Male (5)Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ - တခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ - Sales & Marketing ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် Certificate (or)Diploma ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။
Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Fashion Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးရှိပါသည်။ 1.Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်။
- ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ - Fashion ပိုင်းအရောင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။ - ရုံးကားဖြင့် နယ်သွားနိုင်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00 – 5:30) ။ - တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။
Sales Supervisor - Male/Female (5) Posts
Sales Supervisor - Male/Female (5) Posts/ Salary (250,000) above Kyats/ Shwe Pyi Thar Township Yangon - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ Sales & Marketing Certificate ရရှိထားလျှင် ပို၍သင့်တော်သည်။ - Sales & Marketing Field တွင်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၄) နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်မှ (၃၀) နှစ်အထိ။ - ရေသန့်နှင့် အချိုရည်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။ - ရန်ကုန်မြို့တွင် လမ်းကြောင်းများကို ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်သူဖြစ်ရမည်။ - Customer Relationship Management ကို ကျွမ်းကျင်းနှံ့စပ်စွာသိရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - Target ထိအောင်ရောင်းနိုင်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ [caption id="attachment_765" align="alignnone" width="455"] Young business man working together with her colleague on laptop in office. Shallow focus.[/caption]
Supervisor (Sales & Marketing) - Male/Female (20) Posts
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ Supervisor (Sales & Marketing) -Male/Female(20)posts/Salary-(350000-500000) /Bahan Township. -Any graduate, DMA/ Diploma or Certificate in related filed; -Minimum of (5) years experiences in similar poisition Sales & Marketing ; -Person to person sales skill and ability to handle custromers inarequirement. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales and Marketing Supervisor - Male (7) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales and Marketing Supervisor – Male (7) Posts / Salary 2500,00 Kyats /Ba Yint Naung Township - ဘွဲ့ရ ၊ အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - စကားပြောကျွမ်းကျင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) [caption id="attachment_1346" align="alignnone" width="400"] ProEXR File Description
Marketing Supervisor - Female (5) posts
Any Graduate အသက် ၂၀ မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ အတွေ့အကြုံ ၁နှစ်ရှိရမည်။ Facebook page ကိုင်နိုင်ရမည်။ English နှင့် မြန်မာစာအရေးအသားကျွမ်းကျင်ရမည်။ Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Sales & Marketing Supervisor - Males (5) posts
Any Graduate Age between (30) years old Minimum (3) years experiences in related Marketing & Electrical Material field and must be able to travel Fluent English four skill, Microsoft office, Internet, Email and PowerPoint